Jiri ntinye Wi-Fi anyị nwekwuo nchọgharị weebụ | Akụkọ akụrụngwa
Etu ị ga-esi mee ka njikọ Wi-Fi dịkwuo ngwa na ndụmọdụ bara uru
Ihe dị ka afọ 10 gara aga (odika) mgbe Internet bụ otu n'ime ndị kasị rịọrọ mgbasa ozi site na onye biara iji ya na akara igwe, ọsọ nnweta bụ otu n'ime ndị dara ogbenye na ọtụtụ mediocre n'akụkụ ụfọdụ nke ụwa. Ihe anyị nwere ugbu a dị ka njikọ Wi-Fi enweghị ihe ọ bụla ma e jiri ya tụnyere ihe anyị gaara enwe n'oge ahụ.
N'isochi n'oge ahụ (ihe dịka afọ 10 gara aga) ọtụtụ ndị gbalịrị ịchọta ụzọ kachasị mma maka melite gị internet nchọgharị, na-eji a ọnụ ọgụgụ buru ibu nke ngwa na theoretically gbanwetụrụ ụfọdụ parameters nwere a "turbo" ọsọ, ihe na-adịghị arụ ọrụ na na ike kama-atụle ka a hoax na akụkụ nke onye ọ bụla ọkọnọ kwuru ngwá ọrụ. N'oge taa ọtụtụ mmadụ na-eji njikọ Wi-Fi iji sọfụ ịntanetị, ihe enwere ike imelite site na ezigbo aro na aghụghọ ole na ole, nke anyị ga-atụ aro n'okpuru.
1 1. Ezi mgbaama njikọ Wi-Fi na-enweghị mgbidi etiti
2 2. Zere ihe dị n'etiti etiti rawụta na ngwaọrụ mkpanaka
3 3. Belata ojiji nke ikuku ngwaọrụ na ngwa mma
4 4. Omnidirectional antennas vs. unidirectional
5 5. Dochie kaadị netwọk na rawụta
1. Ezi mgbaama njikọ Wi-Fi na-enweghị mgbidi etiti
Ihe anyị na-atụ aro n'isiokwu a bụ ndụmọdụ bara uru na n'ọtụtụ ọnọdụ enweghị ihe jikọrọ ya na ngwa ndị ọzọ. N'echiche a, ebe ị rụzuru ịchọta gị rawụta ga-abụ isi ụkpụrụ gị Wi-Fi njikọ na-oru oma na isi ihe dị iche iche n'ụlọ gị ma ọ bụ ọrụ. Ọ dị mkpa iji gbalịa izere mgbidi dị n'etiti ma ọ bụ na ha nwere ole na ole ka o kwere mee ka njikọ Wi-Fi rute ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ gburugburu ebe a ga-eji ya na ngwaọrụ mkpanaka ma ọ bụ laptọọpụ dị iche iche.
Eserese ahụ anyị sere n’elu bụ ntakịrị ihe atụ ya, ebe a dọbara ya a red ntụpọ dị ka ọnọdụ nke anyị rawụta. Na nhọrọ mbụ (akụkụ nke elu nke ihe ngosi) rawụta dị n'ọnọdụ ọjọọ, nke a n'ihi na ụlọ C na E ga-enweta otu ma ọ bụrụ na onye ogbenye. Ihe eserese dị na ala, Otú ọ dị, bụ nhọrọ dị mma, ebe ọ bụ na mgbaàmà ahụ ga-anwa iru ụlọ dị iche iche na gburugburu ebe obibi nha anya.
2. Zere ihe dị n'etiti etiti rawụta na ngwaọrụ mkpanaka
N'agbanyeghị eziokwu ahụ bụ na anyị kpọtụrụ aha na ngwaọrụ mkpanaka, njikọ Wi-Fi na sọfụ ịntanetị dịkwa na laptọọpụ. Ihe ndị anyị kpọtụrụ aha na nke na-ekwesịghị ịnọ n'etiti etiti ọrụ 2 ndị a bụ arịa ụlọ (dịka ndị ahụ dị ike iji megharịa ahụ), Igwe mmiri, enyo na ole na ole.
Gịnị mere anyị ji kwuo ihe a? Nanị n'ihi na ọtụtụ ọla nwere ike igbochi usoro ebili mmiri na-ebugharị; Banyere ndị na-ajụ oyi, mmiri nwere ike ibelata akara ngosi 2,4 Ghz, ọnọdụ nke na-emekwa na enyo, ebe ọ bụ na nke ikpeazụ a na-enwekarị ihe mkpuchi pụrụ iche na azụ nke na-amata mgbaàmà na oge a.
Gịnị ka ị ga-eme mgbe ahụ? Anyị kwesịrị ịme otu akara ngosi dị n'etiti router na ngwaọrụ mkpanaka anyị (ma ọ bụ laptọọpụ), na-enweghị nke ọ bụla n'ime ihe ndị a anyị kpọtụrụ aha n'etiti iji mee ka ebili mmiri ahụ ghara ịda mbà na njikọ Wi-Fi anyị.
3. Belata ojiji nke ikuku ngwaọrụ na ngwa mma
Ọ bụrụ na njikọ Wi-Fi na-eji 2.4 GHz ugboro ole, ọtụtụ ngwa nke anyị ji arụ ọrụ kwa ụbọchị nwere ike ịdị n'otu ụzọ ahụ, nke a ga-ewepụ ha otu o kwere mee.
Anyị na-ezo aka kpọmkwem na ụmụ oke, ahụigodo, ndị na-ebi akwụkwọ, ma ọ bụ ihe ntanetị ndị ọzọ. Dị ka akụkọ dịka ọ nwere ike iyi, microwaves na-arụkwa ọrụ na 2.4 GHz ugboro ugboro, ihe dị nwere ike ibute ụfọdụ ndabichi na njikọ Wi-Fi na anyị na-eji ihe karịrị ịntanetị eme ihe
4. Omnidirectional antennas vs. unidirectional
E nwere ụfọdụ ụdị nke ndị na-anya ụgbọelu nwere mpi, nke na-ahụ maka ịpụpụ na izipu ebili mmiri dị iche iche na njikọ Wi-Fi; Mpi ndị a na-adịkarị obere, ihe na-abụ nnukwu nsogbu n'ihi nha a, a ga-ejikwa ihe dị iche iche rụọ ọrụ ahụ. Ndị ọkachamara na kọmpụta na-adụ ọdụ ịzụta mpi buru ibu nke nwere ike dochie nke mbụ arụnyere na router.
Ugbu a, e nwere antennas omnidirectional na unidirectional, nwere nnukwu ọdịiche dị na nke ọ bụla n’ime ha. Ndị nke mbụ ga-eziga mgbaàmà njikọ Wi-Fi n'ụzọ na-enweghị nsogbu n'akụkụ niile, nke a bụ ihe kpatara na anyị ga-atụfu ụfọdụ njikọ Internetntanetị anyị. Ihe kacha mma bụ iji unidirectional mpi jikọtara ya na Wi-Fi repeaters pIji meziwanye nnabata mgbaama.
Banyere ndị na-emegharị Wi-Fi, nnukwu ndudue bụ idowe ha ebe mgbaàmà na-esighi ike. Ihe kacha mma bụ cdochie ndị na-emeghachi ya n’ebe a ka mgbaàmà ahụ siri ike ya mere ị nwere ike ịtụtụrụ ya ma si otú a kesaa ya na onye nrụpụta ọzọ.
5. Dochie kaadị netwọk na rawụta
Ọ bụrụ na ihe niile anyị dụrụla na mbụ anaghị arụ ọrụ, mgbe ahụ nsogbu nwere ike ịbụ na ebe nke si; rawụta nwere ike izipu mgbaàmà na-adịghị ike ma ọ bụ nke na-adịghị akwụsị akwụsị, inwe mgbanwe maka nke ozo di iche n’agbanyeghi, oru a gha aru oru na ulo oru nyere gi oru Intanet. Banyere kaadị ntanetị, ọ bụrụ na ị na-eji kọmputa desktọọpụ onwe gị, ị ga-atụle ịtụgharị gaa na ngwaike ngwaike a, ihe ga-efu gị ihe dị ka $ 30 dịka dabere na akara ị họọrọ.
N’isiokwu a, anyị kọwara akụkụ ole na ole ị kwesịrị ịlebanye anya mgbe melite nchọgharị na weebụ gị na njikọ Wi-Fi, Ndụmọdụ na dị ka o kwere omume anyị enweghị iji ngwaọrụ ndị ọzọ kama kama, obere mgbagha na ụkpụrụ kọmputa.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Akụkọ akụrụngwa » General » software » Etu ị ga-esi mee ka njikọ Wi-Fi dịkwuo ngwa na ndụmọdụ bara uru
Etu esi melite Storelọ Ahịa Play na ụdị nke kachasị ọhụrụ
Otu esi enweta ngwa na ọrụ nke iPhone SIM